IPodcast 10x03: Ukuthenga okomntu okanye okuSmart? | IPhone iindaba
Ii-iPhones ezintsha azikafiki kubathengi bazo, kodwa uphononongo lokuqala sele lukhona. Uhlalutyo lwamalungelo okuqala iApple iwavumele ukuba angene kwi-iPhone ngaphambi kokuba nabani na ahluke kwaphela, kodwa ziyafana okanye zingangqinelani koko bacinga abasebenzisi xa bethatha isigqibo sokuba kutheni i-iPhone ithenge. I-XS ayimfuneko ukuba uqala kwi-X, i-XS Max lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna isikrini esikhulu, kwaye i-XR ibonakala ngathi iyakothusa.. Ngaba uthenga okanye uthengile? Yintoni esishukumisayo xa sithatha isigqibo sokuba yeyiphi i-iPhone yokuthenga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 10 × 03: ICaprice okanye ukuthengwa smart?
Qho ngonyaka ndithenga eyona terminal zangoku kwiApple. Ndiyenze iminyaka emi-5. Ngoku ndine Iphone X kunye neApple Watch series 2. Ngale Mvulo ndibeke Iphone Xs kunye neApple Watch series 4. Whimsy ?? Kwimeko yam ngaphandle kwamathandabuzo. Kodwa yeyona nto ndiyithandayo. Abanye basebenzisa imali kwiibhayisekile ezingama-2000 XNUMX okanye kumavili emoto. Ndiyichitha kwiifowuni zeApple. Kwaye kunyaka olandelayo, ndiza kuthengisa ii-iphone Xs ndize ndithenge enye. Ukubulisa.
Abantu bayayiqonda into yokuba ungachitha i-1000 leerandi kwitikiti lebhola ekhatywayo, kodwa ayisiyiyo le uyenzayo kwi-iPhone. Wonke umntu wenza le nto ayifunayo kwaye angayenza ngemali yakhe.
I-iOS 12.1 Beta 1 ibandakanya ukubizwa kweQela lobuXesha beXesha kunye ne-ID yobuso ethe tyaba
Umnyhadala wokubonisa we-iPhone entsha ngoku uyafumaneka kwi-YouTube